ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဂိုးသွင်းစံချိန်ကို လီယွန်နယ် မက်ဆီ လိုက်မီနိုင်မလား | Mizzima Myanmar News and Insight
ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဂိုးသွင်းစံချိန်ကို လီယွန်နယ် မက်ဆီ လိုက်မီနိုင်မလား
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ သူတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးပုံစံမှာ ရှိမနေပေမယ့် ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုတစ်ယောက်က သူတို့ကို နောက်တစ်ကြိမ် ကယ်တင်လိုက်ပြန်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း တိုက်စစ်မှူးဟောင်းဟာ အမ်စတာဒမ်မှာ အေဂျက်စ်ဖက်ကို သွင်းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးအပါအဝင် ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ၁၆၁ ပွဲကစား၊ ၁၂၅ ဂိုးအထိ ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် သူဟာ အနီးဆုံးပြိုင်ဘက် လီယွန်နယ် မက်ဆီအထက် ၁၇ ဂိုးအသာနဲ့ ဦးဆောင်နေပါတယ်။ ၃ နှစ်နီးပါးငယ်တဲ့ ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူးက သူ့ကို လိုက်မီနိုင်မှာလား?
အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် ရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က မန်ယူအသင်းအတွက် ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲဦးထွက်ကစားခဲ့ပေမယ့် ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခြင်းတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာတော့ ရိုးမားကို ၇-၁ ဂိုးနဲ့ နိုင်တဲ့ပွဲမှာမှ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုံးသွင်းဂိုးအဖြစ် ၂ ဂိုး သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
၁၂ နှစ်အကြာ ဒီကနေ့အချိန်မှာတော့ အေဂျက်စ်ဘက်ကို သူ့ရဲ့ ခေါင်းတိုက်ဂိုးနဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ် သွင်းဂိုး ၁၂၅ ဂိုးနဲ့ ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူတဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
"သူဟာ မတူညီတဲ့ အဆင့်တစ်မှာ ရှိတယ်ဆိုတာ ရော်နယ်လ်ဒိုက ပြသခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ တွက်ဆပုံနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေက အခြားကစားသမားတွေနဲ့ လုံးဝ မတူညီပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး လုပ်နိုင်မယ့်သူ မရှိပါဘူး။"လို့ ဂျူဗင် နည်းပြ အယ်လီဂရီက Sky Sport Italia ကို ပြောသွားပါတယ်။
"သူဟာ တခြားသူတွေထက် မတူညီတဲ့ နည်းစနစ်တစ်ခုရှိတဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။"
ရော်နယ်နယ်ဒိုဟာ ဒီရာသီချန်ပီယံလိဂ် ၈ ပွဲမှာ ၅ ဂိုးမြောက် သွင်းယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီက ၁၇ ဂိုးထိ သွင်းယူကာ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးရာသီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ တစ်ပွဲ ပျမ်းမျှ ဂိုးသွင်းနှုန်း ၀.၇၇ ဂိုးနှုန်းအထိရှိပါတယ်။
ရော်နယ်လ်ဒိုကို မက်ဆီ လိုက်မီနိုင်မှာလား?
အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် မက်ဆီအနေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာမှာ စတင်ကစားခဲ့ပြီး အစပိုင်းမှာတော့ ရော်နယ်လ်ဒိုထက် ဂိုးပိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ တကယ်ပါပဲ မက်ဆီဟာ ၂၀၁၁-၁၂ ဘောလုံးရာသီအကုန် ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ၁၃ ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရော်နယ်ဒိုက ၂၀၁၁-၁၂ ဘောလုံးရာသီကစပြီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘောလုံးရာသီအထိ တစ်ရာသီကို ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုး အနည်းဆုံး ၁၀ ဂိုးထိ သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ပေါ်တူဂီကစားသမားက လက်ရှိမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားအဖြစ် ဦးဆောင်နေပါတယ်။
မက်ဆီရဲ့ ၁၀၈ ဂိုးဟာ ၁၃၂ ပွဲ ကစားရာမှာ ရရှိထားတဲ့ သွင်းဂိုးဖြစ်ပြီး တစ်ပွဲပျမ်းမျှ ၀.၈၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိပါတယ်။
မက်ဆီအတွက် ရော်နယ်လ်ဒိုကို လိုက်မီဖို့ဆိုရင် ရော်နယ်လ်ဒိုက ဂိုးထပ်မသွင်းတော့ပဲ မက်ဆီက သူ့ရဲ့ ဂိုးနှုန်းအတိုင်း ဂိုးဆက်သွင်းယူခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ မက်ဆီဟာ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ နောက်ထပ် ၂၁ ပွဲလောက် ကစားဖို့လိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ဗိုလ်လုပွဲရောက်ခဲ့ရင်၊ ပြီးတော့ လာမယ့်ရာသီမှာလည်း ဗိုလ်လုပွဲထိ တက်လှမ်းခဲ့ရင်တော့ မက်ဆီအနေနဲ့ အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်ရောက်လာမယ့် ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီရဲ့ အုပ်စုအဆင့်မှာ ၁၂၅ ဂိုးထိ သွင်းယူမယ့် လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
ဖြစ်နိုင်သလား? ဒါပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရော်နယ်လ်ဒိုကို မကြာခင် ဘယ်အချိန်မျိုးမှာမဆို ရပ်တန့်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်မလား?
အခြားသူတွေကော သူ့ကို လိုက်မီနိုင်မှာလား?
ပြန်ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ စကားလုံးမရှိပါဘူး။ နိုးပေါ့။
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်တိုက်စစ်မှူး ဘန်ဇီးမားက လက်ရှိအချိန်ထိ ကစားနေတဲ့ နောက်ထပ် ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သွင်းဂိုး ၆၀ ထိ သွင်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မန်စီးတီးတိုက်စစ်မှူး အဂူရိုက ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ အဆင့်ကို လိုက်မီဖို့ဆိုရင် ၈၉ ဂိုး လိုအပ်ပြီး သူကတော့ အသက်က ၃၀ နှစ်ရှိပါပြီ။
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ၁၇ ပွဲမှာ ၁၄ ဂိုးထိ သွင်းယူထားတဲ့ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ဟယ်ရီကိန်းတောင်မှ လက်ရှိ ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ စံချိန်ကို ရောက်ရှိဖို့ဆိုရင် တစ်ရာသီ ၁၁ ဂိုး သို့မဟုတ် အထက် သွင်းယူပြီး ၁၁ ရာသီထိ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(BBC Sport ရဲ့ Cristiano Ronaldo's Champions League record - can Lionel Messi match it? ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
Cristiano RonaldoLionel MessiChampions LeagueCristiano Ronaldo's Champions League record